PC Kuvaka Simulator - Tamba uye Dzidza | Linux Vakapindwa muropa
Haisi mutambo wevhidhiyo wakajairika, PC Building Simulator ndeimwe yeaya ekufananidza emitambo yemavhidhiyo ayo mukuwedzera kukuvaraidza, sezvavanogadzirisazve nharaunda yekugadzirisa uye kuwedzera kwemidziyo yemakomputa kukuita kuti unzwe kunge nyanzvi yechokwadi. Pamusoro pezvo, iyo simulator inowanikwa yeLinux, Windows uye Mac, ichigona kuve dzidziso kune avo vanotanga sevashandi vekombuta.
Iyo yakanaka kwazvo kosi iyo inovaraidza neiyi nzira inonakidza kwazvo, ichitibvumidza isu kuti tizive zvirinani izvo zvinhu zvatinogona kuwana mukati mekomboti shongwe, kuiswa kwavo, nezvimwe. Kunyangwe ichiri muchikamu chekusimudzira, yatove kushanda uye iwe unogona kuyiyedza kubva ikozvino zvichienda pakombuta yako. Kune chikamu chayo, McINTYRE, anerunyerekupe programmer, ndiye anotungamira kuenderera pamwe nekuvandudza kwayo kusvika apedza chikamu chekutanga ichi uye achigadzirira zvachose munguva ...
Mushure mekuita chaiwo miedzo neiyo simulator, iwe unenge wave kukwanisa kuvaka yako desktop desktop. Uye kunyangwe ichibvumidza akati wandei vhidhiyo mutambo modes, haisati yavapo muCustomer mode kuti uende wega uchiita zvaunoda, asi iwe unogona kutamba mune imwe nzira yakaganhurirwa apo vhezheni yekupedzisira ichibuda. Ukasarudza kuiisa, unogona kutarisira bhajeti yekutanga ye $ 2000 kutenga izvo zvikamu kuti ubatanidze michina muPC Kuvaka Simulator.
Kwechinguva iri muchirungu, asi iyo dzidziso yakanaka uye hauzove nedambudziko kuipedza. Mutambo uri nyore, iwe unoverenga odha, vhara iwo meseji uye ipapo iwe unokwanisa kuwana iyo inventory kusarudza izvo zvinhu zvaunobvunzwa uye wotanga kuunganidza iyo michina. Iwe unozokwanisa kufambisa kamera kuburikidza nekuona kwemukati meiyo track kuti ugone kuisa zvese zvinhu uye kupedzisa basa rako. Zvishoma nezvishoma zvishoma mashandiro achavandudzwa uye isu zvechokwadi tichaona zvimwe zvakasiyana muhuwandu.
Dhawunirodha izvozvi uye ubhadhare nePayPal.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » PC Kuvaka Simulator - Tamba uye Dzidza
Linux Lite 3.4 yave kuwanikwa yemacomputer ane mashoma zviwanikwa
6 yemahara Dropbox dzimwe nzira dzeLinux